Izinzuzo ezi-5 Zokumakethwa Kwe-Agile Kunezinqubo Zokukhangisa Zendabuko » Martech Zone
ULwesine, May 18, 2017 ULwesithathu, May 24, 2017 Douglas Karr
Njengoba izinhlangano zentuthuko zikhula ngosayizi nobubanzi, zaqala ukuba nezinkinga eziningi ngokwengeziwe. Inhlangano enkulu ingenza ukukhishwa kwekota ngamakhulu konjiniyela ibhala izinkulungwane zemigqa yekhodi esebenza kahle endaweni, kepha ibangele ikhanda nokushayisana ezansi nomfula ngesiqinisekiso sekhwalithi. Lokho kushayisana kungaholela ekususweni kwezici, ukubambezeleka kokukhishwa, nokuhlangana phezulu naphansi kohlu lomyalo wokuzama ukususa izivimbamgwaqo. Izindlela ze-Agile zinikeze indlela ehlukile, zisebenzisa amaqembu abambisanayo, anikwe amandla okushayela imiphumela yesikhathi eside ngochungechunge lwe- i-sprints.
Amasu wokumaketha wanamuhla adinga ukuthi izinkampani zidlule ku uhambo lokukhangisa olushesha ukuqinisekisa ukuthi amasu wokusebenza asebenzayo, ama-omni-channel angafinyelela ezinhlosweni zenhlangano. Ngakho-ke izinqubo ezifanayo ezisize ukwenza lula nokusheshisa ukuthuthukiswa kwamabhizinisi zisetshenzisiwe emaqenjini okukhangisa. Kule infographic evela ku-CMG Partners, babhekisa ku- Ukumaketha kwe-Agile njengohlelo olusha lokusebenza lokumaketha.
Izinzuzo ze-Agile Marketing
Ukwenza umsebenzi ofanele - Abakhangisi bagxila kulokho amakhasimende akudingayo kunezinqubo zangaphakathi, zefa kanye nezinqubo ezihamba phambili ezihudula njalo njalo.
Ukwenza ngesikhathi esifanele - ngokunciphisa umjikelezo nokubeka phambili imikhankaso nemizamo, abathengisi bangaphendula ngokushesha ezidingweni zamakhasimende.
Ukufinyelela kubantu abafanele - amaqembu abambisanayo namasu asebenzayo aqondisa amakhasimende afanele ngomyalezo ofanele ngesikhathi esifanele.
Ukuthola imiphumela enomthelela - ukwephula ama-silos nezinqubo zokuhlengahlengisa kuqinisekisa ukuthi ukuthumela imiyalezo kungenziwa ngcono isiteshi esiphambanweni sokufinyelela okuphezulu nemiphumela.
Ukuthuthukisa nokwenza ngcono - imijikelezo ephindaphindayo iqinisekisa ukuthi izifundo ezifundwe ku-sprint yokugcina zisetshenziswa kolandelayo, ngokuqhubekayo kuthuthukiswa i-ROI yokumaketha.
Nakhu ukuphazamiseka kokuthi amaqembu amaningi wokumaketha asebenza kanjani uma kuqhathaniswa nokuthi abathengisi beshesha basebenza kanjani.
Tags: ukuphendulasishayeukumaketha okudalaindlela ye-agileokusebenza kahleukugxila kwamakhasimendeukuhlolwaizikhundla eziphezuluiterativeukufunda okusheshayoengozini yokuyekaukumaketha kwendabukoamanzi
I-Vectr: Enye indlela yamahhala eya ku-Adobe Illustrator